Sagantaa Waamicha hawaasa Muslimaa Biyya Saud Arabiyaa Magaala Riyaadit argamtan maraaf Oromia Shall be Free |
Sagantaa Waamicha hawaasa Muslimaa Biyya Saud Arabiyaa Magaala Riyaadit argamtan maraaf
bilisummaa July 18, 2015	Comments Off on Sagantaa Waamicha hawaasa Muslimaa Biyya Saud Arabiyaa Magaala Riyaadit argamtan maraaf
Ijaarsa Masjiida Hararge Bahaa Magaala Baroodati argamu xumursiisuf sagantaan guddan Guyaa booru guyaa sabtii Adooleysa 18/ 7/ 2015 istaraha all majjiid shari all farayan jedhamuut qophiin Salaata Asrii booda ni jalqabama .
Mana Rabbii wojiin taane haa ijaaru !
0550429759 / 0558600949
Sagantaa kana gubbat argamuun Ijaarsa masjiida kanaaf gumaacha keeysan akka taasiftan qopheeysitootin sagantiicha waamicha islaamawwa isiniif dhiheeysa jiru .
Tags Baroodaa Riyaad sa'udii
Previous HIN CALLISINAA!
Next “Hawaasa Oromoo kan Abdii kutachiisa jiran hoggantoota aboo ofiin jedhu”